Haddii aad isticmaasho qalabka Apple ah, waa in aad hore u ogeyd in qalab aad uu taageeray marka aad u xirmaan Lugood. Waxaa muhiim ah in la raaco qaar ka mid ah talooyin la xiriira aad files gurmad sababtoo ah marka aad lumiso xogta aad, waa files gurmad oo ogolaan kartaa in aad soo celiso.
Sida habboon, waa in aad hubiso in aad computer ayaa Lugood version ugu dambeeyay ee lagu rakibay si aad heli kartaa ugu badan uga faylasha gurmad. Halkan waxaan doonayaa in aan la hadlo of 7 ka mid ah talooyin fiican ee files gurmad.
Ka gurmad iPad Soo Celinta iPhone
Haddii aad qabto wax faahfaahin ah ka lumay ee aad iPhone iyo aad raadinayso in la soo celiyo files aad, waxaad u baahan doontaa caawimo ee aad files gurmad. File ayaa gurmad oo waxa lagu kaydiyaa aad Lugood ma akhrin karo taasoo la micno ah in aad u baahan tahay lahaa shawladda gurmad u hawsha ah. Dheeraad ah, haddii aad leedahay gurmad ah u iPad iyo aad u celinta in qalab kale Apple sida iPhone, ma noqon doonaa in la soo celiyo files oo dhan sida sawirada camera oo duudduuban, fariimo iyo xitaa cadaymaha cod awoodaan. Tani waa sababta aad u baahan tahay software fiican u kala iibsiga dhamaystiran si aad u gurmad.
Mid ka mid ah software caan ah oo wax ku ool ah kaas oo noqon kara anfacaya waa Wondershare Mobile Trans . Software waxaa loogu tala galay in ay oggolaadaan in aad si fudud u soo ceshano files ka gurmad ah oo gaboobay oo soo celin xog ku saabsan qalab aad. Ha noo arkaan sida loo gaari karo taasi.
Download Wondershare Mobile Trans oo aan bilowno aad kombuutarka
Marka aad codsigan u ordaan, waa in aad u jiheysan "Soo Celinta From hayaan" mode.
Waxaad ka heli doontaa liiska dropdown badanu ku jiraan noqon doonaa fursado badan ah.
Dooro Xagga Lugood ee kaabta File "
Qaado cable USB ah oo lagu xiro qalabka aad si PC
Markii telefoonka la ogaado, waxaad ka heli doontaa in daaqadaha codsiga
Waxaad ka heli doontaa liiska gurmad buuxiyo on furmo suuqa
Dooro file gurmad oo aad rabtid in aad dib u soo nooleeyaan
Hadda, waxaad yeelan doontaa liiska noocyada xogta.
Riix xogta aad rabto in aad dib u soo ceshano
Riix soo celiyo
dadka isticmaala iPhone soo ceshano karo xiriirada, sawiro, videos iyo fariimaha qoraalka ah
Save faylasha aad soo celiyo goobta la doonayo in aad PC
Gurmad sir iPhone
Haddii aad ka walaacsan tahay ammaanka iyo aadan rabin in macluumaadka si aad u la xaday by Anonymous ama walax, waxaa lagula talinayaa in ay sir aad files gurmad. Your files gurmad si fudud loo isticmaali karaa si ay u helaan xogta gaarka kuu ah, tanina waa sababta imayl waxaa loo arkaa inay doorasho caafimaad leh.
Halkan waxaa ah sidii aad u samayn karaa.
Connect qalab aad si Lugood iyo hubi qalabka galeeysid.
Dhaqaaq tab kooban oo aad ka heli doontaa button ah oo lagu magacaabo 'doorasho' hoose.
Checkbox ugu danbeysay ee akhriya, 'sir gurmad iPhone'.
Hubi in doorasho.
A sanduuq cusub oo wada hadal ka dhex muuqan doonaa.
Waxaad u baahan tahay inaad ku qortaa erayga sirta ah.
Gurmad ayaa Windows XP iyo aad u baahan tahay inaad qortaa erayga sirta ah marka aad soo celin telefoonka la adeegsanayo gurmad ah.
Marka aad qabtid aad files gurmad oo aad raadinayso si ay u maareeyaan xogta app, waxaad u baahan tahay in la xakameeyo barnaamijyadooda ku xoojiyaa in Lugood aad. Waa sidan sidii aad gaadhi karnaa.
Dhaqaaq goobaha aad iPhone
Tubada on kaydinta
Riix ikhtiyaarka, 'Maamul Kaydinta'
Haddii aad leedahay wax ka badan hal qalab Apple, ee ka dooro mid ah oo aad rabto in la xakameeyo by siyoodba magaca qalab aad
Waxaad ka heli doontaa liis ah barnaamijyadooda hoos fursadaha gurmad ah.
Dami app kasta oo aadan rabin in ay dib u kor.
Waxaa lagu weydiin doonaa in aad u xaqiijin ah, doortaan 'dami iyo tirtirto'
Delete gurmad ah oo la xiriira ka iCloud.
Chine ee kaabta in Lugood
Markii aad raadinayso in ay barnaamijyadooda gurmad in Lugood, waxaad hab fudud oo ah in ay u qabanayaan. Si fudud raac tallaabooyinkan.
Lugood Open aad kombuutarka
Raac navigation this.
File Qalabka kaabta
Lugood si toos ah raad joogo doono content in qalab aad ka.
Waxaad riix kartaa on Lugood la door ka dibna u jiheysan qalabka.
Waxaa waxaad arki doontaa gurmad safar files oo ay la socdaan taariikhda iyo magaca qalab aad.
Delete Lugood gurmad kombiyuutarka
Takhalusid gurmad ah on your computer waa quruxsan fudud oo toos ah.
Fur Lugood kadibna xulashooyinka
Waxaad liiska qalabka ay heli doonaan, oo ay la socdaan hayaan ah
Raadi gurmad ah oo aad dooneyso in aad tirtirto
Riix ikhtiyaarka gurmad oo ka dhacay tirtirto
Beddel Lugood gurmad goobta
Haddii aad raadinayso inaad iska baddasho goobta aad gurmad, halkan waa sida aad u gaadhi karnaa.
hayaan Lugood ay ku kaydsan yihiin at
C: \_ Users \_\_ AppData \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ kaabta.
Username waa dhab ahaantii magaca PC
Hadda, la abuuro folder cusub ee gurmad ee drive ee aad dooratay
Hadda, waxaan u baahan nahay in aan isku xirno folder cusub sidii gurmad file.
Ku qor sida maamulka iyo ku qor amarka soo socda.
mklink / J "% APPDATA% \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ kaabta" "D: \_ kaabta"
Hubi in aad hadda calaamadee magaca buugga iyo folder.
Halkan 'raad raac "waa magaca folder cusub.
Meesha gurmad ayaa si guul leh bedelay.
View kaabta Lugood
Si aad u eegto gurmad Lugood ah, guuraan ~ / maktabadda / codsiga taageerada / mobilesync / gurmad
Waxaad ka heli doontaa liiska qalabka kala duwan iyo gurmad
Fiiri magaca gurmad ah oo ay la socdaan timestamp ah si aad u hesho gurmad aad u baahan tahay.
> Resource > Lugood > 7 ee muhiimka ah ee kaabta Talooyin Lugood ma aha inaad Miss